यी बृद्धले एक्लैले लगातार ३० बर्षमा पहाड फोरेर ल्याए नहर, पुरै जिल्लाले पायो सिंचाई !
सोमबार २९ भदौ, २०७७
काठमाडौं । विश्वमा अहिले हरेक कुरामा सफल भएको प्राणी मानिस मात्रै हो । मान्छेले जे चाह्यो त्यो पुरा हुँदै गइरहेको छ । यो बीचमा भारतको बिहारको गया जिल्लाका एक व्यक्तिले आफ्नो कडा परिश्रम र समर्पणबाट यो प्रमाणित गरे कि यदि इच्छाशक्ति र साहस छ भने, कुनै पनि काम गाह्रो छैन ।
गयाको लाहतुआ क्षेत्रको कोठेलवा गाउँका बासिन्दा लोन्गी भुइयाँले ३० वर्ष कडा परिश्रम गरेर तीन किलोमिटर लामो नहर निर्माण गर्न सफल भएका छन् । उनको ३० वर्षे लामो मेहनतपछि पानी पहाडबाट गाउँका खेतहरूमा सजिलै पुग्न थालेको छ ।
यसबाट गाउँलेहरूले ठूलो फाइदा उठाउन थालेका छन् । लोन्गी भुइयाँ एक्लैले नहर खन्ने काम पुरा गरेका हुन् । भुइयाँले भने, ‘यो नहर खोल्न मलाई ३० बर्ष लाग्यो जसले गाउँको पोखरीमा पानी पुर्‍यायो ।’
लोन्गी भुइयाँनले भने, ‘पछिल्लो ३० बर्षदेखि म मेरा गाईवस्तुहरू लिएर जंगलमा जान्थे र नहर खन्ने काम गर्थे । कोही पनि मेरो प्रयासमा सहभागी भएनन् । गाउँका मानिसहरू जीविकापार्जनका लागि सहरमा जान्छन् । तर मैले यहीं बस्ने निर्णय गरें ।’
कोटिल्वा गाउँ जिल्ला सदरमुकामबाट करीव ८० किलोमिटर टाढा छ । उनको घर जंगल र पहाडहरूले घेरिएको छ । यसको मतलब यो हो कि यहाँका जनजीविकाको मुख्य साधन भनेको खेतीपाती र पशुपालन हो । यो गाउँ माओवादीहरूको पकटक्षेत्रका रूपमा पनि चर्चामा रहने गर्छ ।
वास्तवमा वर्षाको समयमा संकलन हुने पानी पहाडबाट खसेर नदीमा बग्थ्यो । यस कुराले भुइयाँनलाई सताउँथ्यो । उनलाई लाग्यो कि यदि यो पानी खेतमा आयो भने यसले गाउँलेहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै उनले नहर खन्न थालेका हुन् ।
एक गाउँले पट्टी माझीले भने, ‘लोन्गी भुईयाँ गत ३० बर्षदेखि एक्लै नहर निर्माणको काममा व्यस्त छन् । उनको प्रयासले ठूलो संख्यामा जनतालाई पानी प्रदान गर्ने छ । यति मात्रै होईन जमिनमा सिंचाई पनि गर्ने छ ।
आफ्नो लागि होइन सम्पूर्ण क्षेत्र मद्दतको लागि बनाए ।’ गयाका शिक्षक रामविलास सिंहले भुइयाँनले गाउँलेहरूको हितका लागि गरेका प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको अहिले धेरै नै तारिफ भइरहेको छ । News Source
श्रीमतीले चिया नबनाएपछि श्रीमानले गरे सम्बन्ध विच्छेद
झुटो बोलेर, ख्याल ठट्टा गरेर नेपालसहित विश्वभर आज मूर्ख दिवस मनाइदैँ
होटलमा लगेर फोटो खिचेपछि पैसा नदिए सार्वजनिक गर्छु भन्दै दर्जनौँ सँग पैसा असुल्ने यी युवती
आम मानवतालाई नै लज्जाबोध : ३० भन्दा धेरै कु’कुर ब’ला’त्कारको भिडियो आएपछि ६७ बर्षीय वृद्ध पक्राउ
भेजा खाजाको अर्डरमा ननभेज पठाउने रेष्टुरेण्टसँग १ करोड हर्जना माग्दै उजुरी
महिलाले माछा जस्तो शिशु जन्माएपछि थाहा पाउने दुनियाँ हैरान !
विवाह गरेर फर्किएपछि जागिर पाउनासाथ दुलही अस्वीकार, घर छिर्न पाउँ भन्दै दिनरात बाहिर धर्ना
भाग्य चम्किएपछि मजदुरबाट करोडपति, खेतमा भेटियो हिराको खानी !
सबैका अगाडी प्रेम प्रस्ताव राखेको भन्दै विश्वविद्यालयद्धारा एक जोडी विद्यार्थी निष्कासन
विवाह सकेर बिदाईको क्रममा अचानक बेहुलीको मृत्यु भयो !
घोडाले मानिस हैन मानिसले घोडा बोकेको कहिलै देख्नुभएको थिएन यहाँ हेर्नुहोस्
देवरसँग भा’गिन् दुई बच्चाकी आमा, चार दिनपछि घर आएर गरेको दावीले दुनियाँ हैरान